IApartment Milieu-Comfortable 1br Apartment
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguLee
Yiza ekhaya kwindlu yakho yabucala enegumbi lokulala, kwindawo ezolileyo yaseMelbourne.
Ukusuka kwi-driveway uya kuba nokufikelela ngasese kwigumbi lokuhlala, eliquka wonke amagumbi aphezulu osapho lwethu oluhlaziyiweyo.
Esi sithuba sifanelekile kubantu abangabodwa okanye abatshatileyo, kwaye besiya kufanela iingcali ezityelela umsebenzi, okanye abo bandwendwela iMelbourne kwindawo yokubalekela esixekweni.
Phezulu, uya kufika kwindawo yakho yokuphumla yabucala - phumla kwibhedi yakho epholileyo yesikhumba, kwaye uphakamise iinyawo zakho emva kosuku olude! Kukho iTV ukuze uyonwabele. Mhlawumbi ukhetha umdlalo weMonopoly okanye iScrabble ukuze uphumle? Ukhetho lwemidlalo yebhodi iyafumaneka ukuba uyisebenzise.
Idityaniswe negumbi lokuphumla yindawo yokufundela – isikhululo seti-yekofu sinokufumaneka apha, sizaliswe ngumatshini wekofu, iketile, imicrowave, ukhetho lweti kunye neekomityi ezinxulumeneyo. Ubisi luya kubonelelwa ngokuhlala kwakho kwibhariji yebha engaphantsi.
Iingcango eziphindwe kabini ukusuka kwigumbi lokuhlala zikhokelela kwigumbi lokulala likaKumkanikazi - ilinen esemgangathweni yehotele ibonelelwe. Unokubona umbono wokutshona kwelanga okumangalisayo kweMelbourne kwiifestile zegumbi lokulala.
Ukudibanisa negumbi lokulala kuyindlela yokuhamba-kwingubo, egcwele izixhoma zedyasi kunye neshelufu eyaneleyo ukuze uyisebenzise. Kwaye ngapha kwengubo yi-ensuite yakho yangasese, eneshawari enkulu enethayile, indlu yangasese kunye nesitya esikhulu samampunge. I-Shampoo, i-Conditioner, i-Body Wash kunye nesomisi seenwele zonke zibonelelwe ukusetyenziswa kwakho. Kukwakhona neetawuli zeshiti lokuhlambela ezitofotofo.
-Izinto zabucala kunye nebhlokhi-ngaphandle iimfama kwigumbi lokuphumla, kwigumbi lokulala kunye neefestile ze-WIR.
- Ifeni yesilingi kwigumbi lokulala.
-Inkqubo yokwahlula umoya / ukufudumeza, ukukugcina ukhululekile nokuba injani na imozulu ngaphandle!
- Intsimbi kunye nebhodi yoku-ayina.
Indawo yethu encinci ibekwe malunga ne-13km ukusuka kumbindi waseMelbourne, kwaye malunga ne-12 km ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseMelbourne. Ukuhamba nje kancinci ukuya empuma kuya kukusa kwiivenkile ezikhethiweyo ezibandakanya iikhefi, ibha yobisi, thatha ukutya kwamaTshayina kunye nevenkile yokubhaka iiyure ezingama-24! Ukuhamba ngokulula kwe-1km ukuya entshona kuya kukuzisa kwindawo yokuthenga ekwidolophu yaseHadfield, eWest Street. Apha, uya kufumana konke okufunayo, kubandakanya:
•	Ivenkile enkulu yokutya
• Iindawo zokubhaka
• Thatha iPizza
•	Intlanzi neetshiphs
•	Ejongene nezokuxhumana
Umbuki zindwendwe ngu- Lee
Little family of four, who love exploring
Imfihlo yakho iyahlonitshwa ngelixa uhlala eApartment Milieu. Ukungena ngaphandle koqhagamshelwano kuyafumaneka. Le ndlu iqulathe amagumbi aphezulu osapho lwethu oluhlaziyiweyo, ngoko ke umamkeli wakho akakho kude ukuba kukho into oyifunayo ngexesha lokuhlala kwakho.
Imfihlo yakho iyahlonitshwa ngelixa uhlala eApartment Milieu. Ukungena ngaphandle koqhagamshelwano kuyafumaneka. Le ndlu iqulathe amagumbi aphezulu osapho lwethu oluhlaziyiweyo, ng…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hadfield